Mpianatra Mpikatroka Indiana Iray Rahonana ho Faty noho ny Fanoherany ny Elatra Havanana · Global Voices teny Malagasy
Mpianatra Mpikatroka Indiana Iray Rahonana ho Faty noho ny Fanoherany ny Elatra Havanana
Voadika ny 06 Marsa 2017 4:23 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, English, Français, English
Sary: Gurmehar Kaur / Twitter
Ny fandrahonana herisetra, ny kapo-dahy ary ny fanafihana ara-batana no vaovao misongadina ao India, rehefa nanatontosa fihetsiketsehana #StudentsAgainstABV (Mpianatra manohitra ny ABVP ilay mpianatra 20 taona avy ao amin'ny Kolejy Lady Shri Ram ao New Delhi.
Nanomboka ny hetsika i Gurmehar Kaur taorian'ny fifandirana vao haingana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny vondrona mpianatra elatra havanana Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), izay manana fifandraisana amin'ny fikambanana nationalista Haindò.
Tamin'ny 21 Febroary, nomanina hotontosaina ao amin'ny kolejy Ramjas ao Delhi ny valan-dresaka antsoina hoe “Kolontsain'ny Fihetsiketseham-panoherana”. Noheverina hanasongadina ireo fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpikatroka antsoina hoe Umar Khalid sy Shehla Rashid, samy fantatra amin'ny fanohanana ny hetsika “Free Kashmir” ny fihetsiketsehana, saingy nahemotra ny valan-dresaka ho setrin'ny fihetsiketsehana lehibe nataon'ireo mpikambana ao amin'ny vondrona mpianatra elatra havanana ABVP, izay namotika ny kolejy ho valifatin'ny fanasana lehilahy iray voampanga ho nanao fikomiana tamin'ny taona 2016.
Taorian'ny fihetsiketsehan'ny ABVP, nikarakara hetsika manohitra izany ny mpianatra, mpampianatra, mpanao gazety sy ny mpikatroka ho fanohanana ny fanasana an'i Khalid and Rashid. Niha-naherisetra ny raharaha rehefa niseho ireo mpikambana ao amin'ny ABVP ary nanomboka niady tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Araka ny filazan'ny tatitra, mpikatroka maromaro no naratra ary voarahona haolana mihitsy aza ny vehivavy sasany.
Nandritra ny fihetsiketsehana, nandefa sary miaraka amin'ny hafatra toy izao tao amin'ny Facebook tamin'ny 22 Febroary i Gurmehar Kaur :
“Mpianatra avy ao amin'ny Oniversiten'i Delhi aho. Tsy matahotra ny ABVP aho. Tsy irery aho. Miaraka amiko ny mpianatra rehetra ao India #StudentsAgainstABVP”
Nanoratra koa izy hoe:
Manakorontan-javatra tanteraka ny fanafihana feno herisetra nihatra tamin'ireo mpianatra tsy manan-tsiny ary tokony hatsahatra. Tsy fanafihana mpanao fihetsiketsehana izany, fa fanafihana ny endrika demokrasia rehetra izay zava-dehibe amin'ny Indiana. Fanafihana foto-kevitra, fitondran-tena, fahalalahana sy ny zon'ny olona tsirairay teraka tao amin'ity firenena ity izany. Mahatratra ny vatanay ny vato nitorahanareo, saingy tsy nahavita nandrava ny hevitray.
Fomba hanoherako ny fangejan'ny tahotra ity sary famantarana ahy ity. Raha mpianatra ao amin'izay oniversite Indiana ianao, ao amin'izay fanjakana Indiana ka maniry hanohitra ny ABVP ary haka selfie mitovy amin'izany sy manao izany ho sary famantarana anao. Ampiasao ny tenirohy #StudentsAgainstABVP ary apetaho miaraka aminy ity hafatra ity.
Fotoana izao hitambaran'ny mpianatra rehetra eto India! Jai Hind! Jai Democracy!
Tamin'izany, nijanona ny hetsika #StudentsAgainstABVP. Avy eo nanomboka nanova ny sarintavany tao amin'ny media sosialy ny mpianatra manerana an'i India mba hanoherana ny herisetra.
Manameloka tanteraka ny fanafihana ny adihevitry ny oniversite ny @NSUIJMI ary mijoro hiray hina amin'ny #DU (Oniversitén'i Delhi)
Mila filaminana sy firaisankina ao amin'ny tobim-pianarana ny mpianatra manerana ny firenena. Andeha hialàna ny eksitiremisma ary arahina ny lalan'i Gandhi ji
Mifahatra miaraka amin'i @mehartweets izahay ary manameloka ny habibiana mahamenatra ataon'ny ABVP.#StudentsAgainstABVP
Mpianatr'i #DelhiUniversity aho ary tsy mila jiolahimboto ao amin'ny tobim-pianaranay izahay. Manohana ny @MeharTweets aho
Nidera ny fisantarana andraikitr'i Kaur ireo mpanohana:
Mahery fo ny #GurmeharKaur miady amin'ny jiolahy #ABVP! mampalahelo ny mahita olona tahaka ny sehwag & hooda tsy miraharaha ny zava-misy!
Tsy nahazo ny fon'ny rehetra i Kaur, mazava ho azy, ary misy ireo mpiserasera aterineto sasany nanao ny tenirohiny mba hampiseho ny mifanohitra amin'ny hafatra:
Ry namana AISA, tsy maintsy ho fantatra foana ny marina!
Nanomboka nampiaka-peo ny mpianatra tsy mitanila ao amin'ny DU (Oniversiten'i Delhi)
Eto ambany no ahitanao ny lahatsarin'i Gurmehar Kaur “miresaka” momba ny fandriampahalemana eo amin'i Pakistan sy India. Namoy ny ainy tamin'ny Ady India-Pakistana ny rainy.
Niteraka fientanam-po ny filazan'i Kaur tao anatin'ny lahatsary hoe: «Nihazona ahy ny reniko ary nampahafantatra ahy fa tsy namono ny raiko i Pakistan, fa novonoin'ny ady izy.”
Niaro azy tamin'ny antsoin'izy ireo hoe fandotoan-drindrina kosa ireo mpiserasera tahaka an'i Anand Ranganathan:
Ity ny lahatsoratra feno mikasika izay nolazan'i @mehartweets tamin'ity lahatsary ity. Ny hita miloko mena no fehezan-teny farany nalaina mba handotoana azy
Fihetsiketsehana tsotra nivadika politika
Ny minisitry ny Atitany Indiana Kiren Rijiju no farany nanatevin-daharana ny adihevitra, manontany ao amin'ny Twitter momba an'i Kaur, “Iza no mandoto ny sain'ity tovovavy ity?”
Iza no mandoto ny sain'ity tovovavy ity? Misoroka ady ny Tafika matanjaka. Tsy mbola nanafika na iza na iza i India saingy tratran'ny fananiham-bohitra hatrany i India fony marefo
Mpanao lalàna hafa avy amin'ny antoko BJP, Pratap Simha, nampitaha an'i Kaur tamin'ilay mpampihorohoro Dawood Ibrahim.
Nilaza ireo mpanohana an'i Kaur fa manan-jo haneho hevitra an-kalalahana izy, zo haneho hevitra izay nolazain'izy ireo fa “simba” tato ho ato ao India, noho ireo manampahefam-panjakana sy mpikatroka ny elatra havavana lazain'izy ireo fa mailaka loatra mametaka anarana hoe “mpikomy” amin'ireo mpanohitra politika.
Ka tonga nandrefy ny fahombiazan'ny hafatrao ampahibemaso ao anatin'ireo hafatra feno fankalahala i @mehartweets.Mikoropaka ireo mpampijaly ny kely noho izy rehefa ifanandrinana
Aza antsoina hoe zanakavavin'ny martiora aho raha manelingelina anao. Tsy nitaky na inona na inona aho na dia izany aza. Azonareo antsoina hoe Gurmehar aho.
Mipao-tsatroka amin'ny fijoroanao, @mehartweets. Manome fanantenana ho an'ny hoavin'i India ny tovovavy mahery tahaka anao
Tsy mahagaga ny “nasionalista” raha mamazivazy an'i @mehartweets amin'ny sary iray amin'ny andian-tantara manontolo . Voafetran'ny fankahalahan'izy ireo araka ny mahazatra ny fomba fijerin'izy ireo
Nahazo fandrahonana Betsaka i Kaur
Nahazo fandrahonana fanolanana sy fahafatesana avy amin'ireo olona miantso azy hoe mpitsikilo “anti-firenena” tao amin'ny media sosialy i Kaur. Nametraka fitarainana tao amin'ny Vaomieran'ny Vehivavy Delhi izy tamin'ny 27 Feb, noho ireo kaonty Twitter marobe nandrahona azy.
Nahoana ireo “nasionalista” ireo no zatra mandrahona fanolanana foana rehefa ifanandrinana?
Aakar Patel, lehiben'ny Amnesty International India, nilaza tamin'ny fanambarana iray manao hoe:
Fampahatsiahivana mahamenatra ny fomba fitohizan'ny fanindriana sy fandrahonana hametra ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny tobin'ny oniversite ny zava-nitranga tao amin'ny Kolejy Ramjas.